मौनीको नखराले फिल्म क्षेत्रमा फ्लप साबित !! - Experience Best News from Nepal
भारतीय टेलिसिरियल हुँदै ठूलो पर्दामा पुगेकी मौनी रायले नागिनको भूमिकाबाट जसरी दर्शकको मनमा छाप छाड्न सफल भएकी थिइन्, त्यस्तो सफलता ठूलो पर्दाबाट पाइसकेकी छैनन् । उनले डेब्यु नै गोल्डेन ब्वाई अक्षय कुमारको फिल्म ‘गोल्ड’बाट गरेकी थिइन् ।
फिल्मबाट निकाल्नुको कारण देखियो गैर व्यावसायिक व्यवहार । यस्तै ताल देखाउने धेरै एक्टर फिल्म नगरीबाट पलायन हुन बाध्य भएका घटनाबारे सायद मौनी जानकार छैनन् जस्तो छ । नसुध्रिए उनको फ्युचर अहिले नै फ्लप देखिन्छ ।
पहिरन कै कारण वलिउडकी मौनी रोय बनिन् ट्रोलको शिकार !!
आखिर प्रदिपलाई यति धेरै तनाव किन ??
फ्यानको अपमान गरेको भन्दै रणबीर माथि ट्रोलको वर्षा !!
जन्म दिनमा राजेश भन्छन २५ बर्षको भएँ !! एकदम पिर पर्या छ
नवलपरासीमा भूवन केसी र नायिका रीमा विश्वकर्माको बिहे